Ọbụna na nnọkọ vidiyo, imekọ ihe ọnụ nwere ike ịdị ka ọ na-ekewapụ ndị mmadụ. Ọnọdụ 3-D VirBELA na-enyere aka ịgbanahụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eme ka ọ dị ka ịnọkọ ọnụ n'otu ọnụ ụlọ, ọ chọghịkwa isi VR. Iji akụ na keyboard gị ị ga-ejegharị, zute ndị mmadụ, kwee aka, kparịta ụka, na-agagharị n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ, ọbụnakwa na-emegharị egwu ụfọdụ.
N’ụzọ dị ukwuu ị na-eme n’ụwa n’ezie, ndị mmadụ nọ na VirBELA nwere ike iwulite mmekọrịta site na ụdị mmegide mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ị ga-enwe n’ọfịs ụlọ ọrụ ma ọ bụ na-awagharị site na mpaghara mgbakọ. Ọ dịka ị na-eguzo n'akụkụ ndị ọzọ, na-ezukọ n'ìgwè. Dịka avatar nwere ụda oghere ị nwere ike ịnọdụ ala na tebụl ọgbakọ na-ege onye nọ n'aka nri gị ntị aka nri gị, aka ekpe gị na ntị aka ekpe gị na 3-D ọdịyo. Na-atụgharị isi gị lee anya n’ime ụlọ ahụ, na-ekwurịtaranụ ibe unu otú unu ga-esi eme ma ọ bụrụ na unu ga-azụ ahịa ọtụtụ kilomita iji nwee ọnụ.
Zọ kachasị mma iji ghọta ihe VirBELA bụ na ihe ọ ga - emere gị bụ nwalee ya for onwe gị. N'etiti ndị ahịa ahịa dị iche iche nke ụlọ ọrụ gụnyere mahadum dị elu, Fortune 500, mama & Pop ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ ndị ahịa dịpụrụ adịpụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ọzụzụ (ebe ọ nwekwara klaasị), yana ndị ọrụ ibe / ịkekọrịta ọrụ. Ma ọ bụ VirBELA ma ọ bụ usoro ikpo okwu ndị ọzọ ka na-ahapụbeghị, ekwenyesiri m ike na ohere ị ga-enwe 3-D bụ ntụzịaka nke ọgbakọ na-aga n’ihu.